Udinga usizo ogulayo ongayitholi impesheni | News24
Udinga usizo ogulayo ongayitholi impesheni
USEZAME konke okusemadleni akhe uNhlanhla Mthembu ohlala eFranklin, ukuthola umsebenzi ukuze akwazi ukuziphilisa.
UMthembu usesimweni esingesihle kahle sempilo kanti udla nemishanguzo yeT.B kanye nesandulela ngculazi (HIV). Iminyaka yakhe isihambile kanti futhi uma ephuma eyofuna impesheni yokugula kuba nhlangazimuka nomoya ngengoba abaqashi nabo bembona ukuthi impilo yakhe ayiyinhle.
UMthembu akanamuntu ongamnakekela kanti nabahlali baseWadini lakhe sebezame kaningi ukuthi bamsize uma isinsiza zika hulumeni zifike ngakubo, kepha lutho usizo lwempesheni alutholakali.
UNokwanda ongumakhelwane kaMthembu uthe ubone kungcono azame ukumcelela usizo emphakathini ukuba umxhase nganoma yini ongakwazi ukumupha yona ukuze aphile.
“Ngingumakhelwane wakhe uMthembu kanti isimo sakhe aphila kuso asisihle neze. Ngizamile ukuba ngimunakekele ngimuphe okuya ethunjwini, kepha nami kuye kubhede nakumina kungabi khona lutho engingamupha yona,” kusho uNokwanda.